အကြောင်းအရာ ထိန်းချုပ်ရေး ဆော့ဖ်ဝဲလ် သည် နိုင်ငံရေး၊ ညစ်ညမ်း
ⓘ အကြောင်းအရာ ထိန်းချုပ်ရေး ဆော့ဖ်ဝဲလ် သည် နိုင်ငံရေး၊ ညစ်ညမ်းစာပေ စသည့် အကြောင်းအရာများ အထူးသဖြင့် အင်တာနက်ပေါ်ရှိ ဤကဲ့သို့သော အကြောင်းအရာများအား စာဖတ်သူများ ဖတ် ..
ⓘ အကြောင်းအရာ ထိန်းချုပ်ရေး ဆော့ဖ်ဝဲလ်
အကြောင်းအရာ ထိန်းချုပ်ရေး ဆော့ဖ်ဝဲလ် သည် နိုင်ငံရေး၊ ညစ်ညမ်းစာပေ စသည့် အကြောင်းအရာများ အထူးသဖြင့် အင်တာနက်ပေါ်ရှိ ဤကဲ့သို့သော အကြောင်းအရာများအား စာဖတ်သူများ ဖတ်ရှုခွင့်ရှိမရှိ ထိန်းချုပ်ပေးသည့် ဆော့ဖ်ဝဲလ် တစ်မျိုးဖြစ်သည်။
1. အတွဲလိုက် အစိတ်အပိုင်းများ
ပါဝင်သည့်- အကြောင်းအရာကို ထိန်းချုပ်သည့် ဆော့ဖ်ဝဲလ် စကားယဉ်၊ အငြိအစွန်းဖြစ်နိုင်သော စာပိုဒ်များကို ဖယ်ရှားခြင်း၊ နှုတ်ပိတ်အမိန့် ၊ ဟက်ကလင်း၊ ဝက်ဘ် ဆိုဒ်တွင် ဖော်ပြချက်များကို ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် ဖျောက်ပစ်ခြင်း၊ သတင်းစာတွင် ဖော်ပြချက်ကို ဆင်ဆာပြုလုပ်ခြင်း၊ ပုံရိပ်ကို မှုန်ဝါးအောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ စာကို စစ်ဆေးခြင်း၊ လူထုဆီသို့ ဆက်သွယ်မှုများ ရောက်ရှိခြင်းကို တားဆီးခြင်း၊ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေး ဝါဒ၊ ကိုယ်တိုင် ဆင်ဆာပြုလုပ်ခြင်း၊ စကားပြောဆိုခြင်း ဥပဒေသ၊ ဗျူဟာမြောက်သော တရားမမှု၊ နှုတ်ဖြင့် ရိုင်းပြခြင်း၊ ဖုံးဖိဖာထေးခြင်း။
ဆင်ဆာထည် သို့မဟုတ် ဝက် ဘ် စစ်ထုတ်ခြင်း ဆော့ဖ်ဝဲလ် ဟုလည်း သိထားသည့် ပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာကို ထိန်းချုပ်သည့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်သည် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော ဆော့ဖ်ဝဲလ် အတွက် ဝေါဟာရ ဖြစ်ပြီး ဖတ်ရှုသူအတွက် မည်သည့်အကြောင်းအရာ ခွင့်ပြု မည်ကို ထိန်းချုပ်ရန် သင့်မြတ်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း အတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အထူးသဖြင့် ဝက်ဘ် ပေါ်တွင် တင်သောအရာကို ကန့်သတ်ရန် ၎င်းကို အသုံးပြုသည်။ ပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာ ကို ထိန်းချုပ်သည့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်သည် မည်သည့် အရာသည် ရရှိနိုင်ကြောင်းကို ဆုံးဖြတ်သည်။
ကန့်သတ်ခြင်းကို အဆင့်အမျိုးမျိုးတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်- အစိုးရတစ်ရပ်သည် ၎င်းတို့ကို နိုင်ငံ အနှံ့တွင် အသုံးပြုရန် ကြိုးပမ်းနိုင်သည် အင်တာနက်ဆင်ဆာလုပ်ခြင်းကို ကြည့်ပါ၊ သို့မ ဟုတ် ဥပမာအားဖြင့် ၎င်းတို့ကို ISP မှ သူ၏ ဖောက်သည်များသို့ ၊ အလုပ်ရှင်တစ်ဦးမှ သူ၏ ဝန်ထမ်းများသို့၊ ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှ သူ၏ ကျောင်းသားများသို့၊ စာကြည့်တိုက်တစ်ခု မှ ၎င်းထံ လာရောက်လည်ပတ်သူများသို့၊ မိဘတစ်ဦးမှသူ၏ ကလေးငယ်သုံး ကွန်ပျူတာသို့၊ သို့မဟုတ် အသုံးပြုသူတစ်ဦး တစ်ယောက်မှ သူ သို့မဟုတ် သူမ၏ ကိုယ်ပိုင် ကွန်ပျူတာသို့ တို့ တွင် အသုံးချခြင်းပြုနိုင်သည်။
ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကွန်ပျူတာ ပိုင်ရှင် များ သို့မဟုတ် အခြားသော အာဏာပိုင်များမှ ကန့် ကွက်စရာဟု ထင်မြင်ယူဆထားသော ပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာကို လူအများ ကြည့်ခြင်းမှ အခါအားလျော်စွာ တားဆီးရန် ဖြစ်ပြီး- အသုံးပြုသူ၏ သဘောတူညီမှုမပါဘဲ ခြယ်လှယ် ပါက ပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာကို ထိန်းချုပ်မှုသည် ဆင်ဆာလုပ်ခြင်း ကို ဖြစ်စေသည်။ ပါဝင် သည့် အကြောင်းအရာကို ထိန်းချုပ်သည့် အချို့သော ဆော့ဖ်ဝဲလ် များတွင် ကလေး များ အင်တာနက် အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ဂိမ်းများဆော့ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားသော ကွန်ပျူ တာ အလုပ်များကို ဆောင်ရွက်ရန် အသုံးပြုမည့် အချိန်ပမာဏကို သတ်မှတ်ရန် မိဘများကို လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးသော အချိန်ထိန်းချုပ်ခြင်း အခြေခံ လုပ်ငန်းများ ပါဝင်သည်။ အချို့သော တိုင်းပြည်များတွင် ထိုကဲ့သို့သော ဆော့ဖ်ဝဲလ်သည် နေရာအနှံ့တွင် တွေ့ရ လေ့ရှိသည်။ ကျူးဘားတွင်၊ အကယ်၍ အစိုးရမှ ထိန်းချုပ်ထားသော အင်တာနက် ကဖေးတွင် ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုသူတစ်ဦးမှ အချို့သော စကားလုံးများကို ရိုက်ပါက ၊ စာစီစာရိုက် ကွန်ပျူ တာ ပရိုဂရမ် သို့မဟုတ် ဘရောက်ဆာသည် အလိုအလျောက် ပိတ်သွားမည် ဖြစ်ပြီး၊ "နိုင်ငံ တော် လုံခြုံရေး" သတိပေးချက်ကို ဖော်ပြမည်။
ဤဆောင်ပါးသည် "ပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာကို ထိန်းချုပ်ခြင်း ဟူသော အသုံးအနှုန်းကို အသုံးပြုသည်၊ စီအင်အင်န်၊ ပလေးဘွိုင်း မဂ္ဂဇင်းနှင့် နယူးယော့ခ် တိုင်းမ်စ်တို့မှ အကြောင်းကိစ္စ အခါအားလျော်စွာ အသုံးပြုသော အသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင် ဖြစ်စေ၊ အခြားအသုံးအနှုန်း နှစ်မျိုးဖြစ်သည့် ဆင်ဆာထည် နှင့် ဝက်ဘ် စစ်ထုတ်ခြင်း တို့ သည် ပို၍ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ဖြစ်သော်လည်း မကြာခဏ အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ နမ်နီထည် ကို ထုတ်ကုန်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းနှင့် မီဒီယာ နှစ်မျိုးစလုံးတွင် အသုံးပြုသည်။
ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များကို သီးသန့်ရွေးချယ်ပြီး တားမြစ် ပိတ်ပင်သော ထုတ်ကုန်များကို ပြုလုပ် သည့် ကုမ္ပဏီများသည် ထိုထုတ်ကုန်များကို ဆင်ဆာထည် အဖြစ် ရည်ညွှန်းခြင်းမရှိဘဲ၊ "အင်တာနက် စစ်ထုတ်ကိရိယာ" သို့မဟုတ် URL ယူအာအယ် စစ်ထုတ်ကိရိယာ" ကဲ့ သို့သော အသုံးအနှုန်းများကို ပိုနှစ်သက်သည်။ မိဘများသည် သူတို့၏ ကလေးသူငယ်များ အား အင်တာနက် သုံးစွဲခြင်းကို စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ရယူသုံးစွဲ မှု ကန့်သတ်ရန် ခွင့်ပြုခြင်း အတွက် အထူး စီမံ ထားသော အထူးကိစ္စရပ်ဖြစ်သည့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွင် "မိဘ၏ ထိန်းချုပ် သော ဆော့ဖ်ဝဲလ် ကို အသုံးပြုသည်။ ဆိုဒ်များ အားလုံးတွင် ဖော်ပြသော အချို့ထုတ် ကုန် များ ကို အသုံး ပြုသူမှ ဝင်ရောက် လေ့လာပြီး ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ ရွေးချယ်မှု "တာဝန် ယူခြင်း မိတ်ဖက်" တစ်ခုကို သတင်းပေးပို့ရန်အတွက် ပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာပေါ်တွင် အခြေခံ၍ ၎င်းတို့ကို အဆင့်ခွဲ ခြားကာ တာဝန်ယူခြင်း ဆော့ဖ်ဝဲလ် ဟူသော အသုံး အနှုန်းကိုအသုံးပြုသည်။ အင်တာနက် စစ်ထုတ်သည့် ကိရိယာများ၊ မိဘ၏ ထိန်းချုပ်သည့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်၊ နှင့်/သို့မဟုတ် တာဝန် ယူခြင်း ဆော့ဖ်ဝဲလ် တို့ကို ထုတ်ကုန် တစ်ခု အတွင်းသို့ ပေါင်းထည့်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။
ထိုကဲ့သို့သော ဆော့ဖ်ဝဲလ်၏ အဓိကကျသောအရာများသည် မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ "ဆင်ဆာ ထည်" ဟူသော အသုံးအနှုန်းကို လွတ်လပ်စွာ အသုံးပြုသည်။ ဥပမာ- ဆင်ဆာထည် စီမံကိန်း ကိုစဉ်းစားသည်။အယ်ဒီတာကဏ္ဍရှိ ဆင်ဆာထည် အသုံးအနှုန်း အသုံးပြုခြင်းသည် ထို ဆော့ဖ်ဝဲလ် ပြုလုပ်သူများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဝေဖန်ပြီး အမျိုးအစားကွဲပေါင်းများစွာနှင့် အသုံးချ ဆော့ဖ်ဝဲလ်များကို အကျုံးဝင်စေသည်။ တရုတ်နိုင်ငံရှိ ပါဝင်သော အကြောင်း အရာ ကို ဖုံးကွယ်ရန် အမေရိကန်လုပ် စစ်ထုတ်ခြင်း ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို အသုံးပြုခြင်း နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးရာတွင် Xeni Jardin ဇီနီဂျာဒင် သည် ထိုအသုံးအနှုန်းကို နယူး ယော့ခ် တိုင်းမ်စ် အယ်ဒီတာ ကဏ္ဍတွင် ၂၀၀၆ ခုနှစ် မတ်လ ၉ ရက်နေ့တွင် အသုံး ပြုခဲ့သည်- ထို လတွင်ပင် အထက်တန်း ကျောင်းသား တစ်ဦးသည် သူ၏ကျောင်း ဒိစတြိတ်တွင် ထို ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို အသုံးပြုခြင်းအား ဆွေးနွေးရန် ၎င်းဝေါဟာရကို အသုံးပြုခဲ့သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် အထက်ဖော်ပြပါ အယ်ဒီတာကဏ္ဍ စာမျက်နှာများမှလွဲ၍ သမားရိုးကျ သတင်းစာများသည် ၎င်းတို့၏ အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းများတွင် ဆင်ဆာထည် အသုံးအနှုန်းကို အသုံးမပြုကြပါ။ ၎င်းအစား ပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာ စစ်ထုတ်ခြင်း၊ ပါဝင်သည့် အကြောင်း အရာ ထိန်းချုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဝက်ဘ် စစ်ထုတ်ခြင်း ကဲ့သို့သော အသုံးအနှုန်းများကို အသုံး ပြုရန် ပိုနှစ်သက်သည်။ နယူယော့ခ်တိုင်းမ်စ် နှင့် ဝေါလ်စထရိ ဂျာနယ် နှစ်ခုလုံးသည် ထိုအလေ့အထကို လိုက်နာသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ ဝက်ဘ် အခြေပြုသော သတင်းစာ များဖြစ်သည့် CNET စီနက် သည် ထိုအသုံးအနှုန်းကို အယ်ဒီတာနှင့် ဂျာနယ်ကဏ္ဍ နှစ်ခု စလုံးတွင် အသုံးပြုသည်၊ ဥပမာ-"ဆင်ဆာထည်များကိုရရှိရန် ဝင်းဒိုးစ်များ တည်ရှိကြ သည်"။
3. စစ်ထုတ်ခြင်း အမျိုးအစားများ
စစ်ထုတ် သည့်အရာ များကို နည်းလမ်းမျိုးစုံတွင် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်- ကိုယ်ပိုင် ကွန်ပျူတာ ပေါ်တွင် ဆော့ဖ်ဝဲလ် ပရိုဂရမ် တစ်ခုဖြင့် သို့မဟုတ် အင်တာနက် ဆက်သွယ်မှုကို ဖြည့် ဆည်းပေး သော ဆာဗာများဖြင့် တို့ဖြစ်သည်။ အိမ်အတွင်းသို့ လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရာ မရှိသော အရာများ မဝင်ရောက်မီ ၎င်းတို့ကို တားမြစ် ပိတ်ပင်သည့် အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှု ဖြည့် ဆည်းပေးသူ ISP ကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရာမရှိသော အရာကို ကလေး သူငယ်များ ကြည့် ခြင်းအား မိဘများ စိုးရိမ်ခြင်းမှ ကူညီကာကွယ်ပေးသည်။
ဆော့ဖ်ဝဲလ်သည် လူ့ကျင့်ဝတ်အရ အသုံးပြုရန် သင့်လျော်သည် တစ်ခါတစ်ရံ တရားဝင် ဖြစ်သည် ဆိုသော အမြင်များသည် ကွဲပြားသော အမှုကိစ္စများတွင် အသုံးပြုသော ထို ဆော့ဖ်ဝဲလ် တစ်ခုတည်းကိုပင် လူအများတစ်ဦးချင်းစီ၏ ခိုင်ခိုင်မာမာ နှစ်သက်ခြင်းနှင့် မနှစ် သက်ခြင်းတို့နှင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ကွဲပြားခြားနားသည်။ဖောက်သည်ဘက်မှ စစ်ထုတ်ခြင်းများ - ဤစစ်ထုတ်ခြင်း အမျိုးအစားကို သင့်ကွန်ပျူတာ ပေါ် တွင် ဆော့ဖ်ဝဲလ်အဖြစ် တပ်ဆင်သည်။ ထို စစ်ထုတ်ခြင်းကို မိသားစု လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန် အထူးပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထိုစစ်ထုတ်ခြင်းကို တစ်စုံတစ်ဦးမှ စကားဝှက်ဖြင့် သာ စတင်မလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ပြုနိုင်သည်။ ဖောက်သည်ဘက်မှ စစ်ထုတ်ခြင်းများသည် စာကြည့်တိုက်ကဲ့သို့သော နေရာများတွင် အလွန်အသုံးတည့်သည်။ စာကြည့်တိုက်များတွင် ဆက်သွယ်ရရှိ်သည့်နေရာ အချို့သာ စစ်ထုတ်ရန်လိုအပ်သဖြင့် ၎င်းတို့သည် ထိုစစ်ထုတ်ခြင်း များ အတွက် အလွန်ကောင်းမွန်သော နေရာများဖြစ်သည်။ ဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့် ကလေး သူငယ်များ ကစားခြင်းနှင့် စာဖတ်ခြင်း အပိုင်းများတွင် ရှိသော ကွန်ပျူတာ ဖြစ်သည်။
ပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာ ကန့်သတ်ထားသော သို့မဟုတ် စစ်ထုတ်ထားသော ISP များ- ပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာ ကန့်သတ်ထားသော သို့မဟုတ် စစ်ထုတ်ထားသော ISP များ သည် အင်တာနက် ပါဝင်သော အကြောင်းအရာ၏ သတ်မှတ်ထားသော အပိုင်းတစ်ခု ကိုသာ ဆက်သွယ်ခွင့်ပေးသော အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အရာဖြစ်သည်။ ထိုဝန်ဆောင်မှု အမျိုးအစားကို မှာယူသုံးစွဲသည့် မည်သူမဆိုသည် ထိုကဲ့သို့သော တားမြစ်ချက်မျိုး များ ကို မှာယူနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သော စစ်ထုတ်ခြင်းများကို အထူးသဖြင့် ကလေးများ အတွက် စီမံထုတ်ထားသည်။ ၎င်းသည် ဂရုတစိုက်ဖြင့် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ဆန်းစစ်ထားပြီး ၎င်းတို့၏ သင့်လျော်မှုနှင့် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုတို့အတွက် အကဲဖြတ်ပြီးသော ဝက်ဘ်ပေ့ခ်ျ များကို ပေးသည်။ ပါဝင်သော အကြောင်းအရာ၊ ဖျော်ဖြေရေး နှင့် ပညာရေးတို့သည်လည်း အဓိက ကဏ္ဍများဖြစ်သည်။ ချက်စကားပြောခန်း နှင့် ကြော်ငြာသင်ပုန်း ဥပဒေများကို ချိုးဖောက်သူ များ အတွက် တင်းကြပ်သောမူဝါဒများ ရှိသည်။ ချက်စကားပြောခန်း နှင့် ကြော်ငြာသင်ပုန်း ဥပဒေများကို ချိုးဖောက်သူ များသည် ဖိတ်ခေါ်ခြင်းမခံရပါ။ အီးမေးလ် နှင့် ချက်ချင်းပေး ပို့သော မက်ဆေ့ခ်ျများသည် သတ်မှတ်ထားသည့် သူများထံမှသာ ရရှိနိုင်သည်။
ကလေးသူငယ်များနှင့် အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ နှစ်မျိုးစလုံးအတွက် ရည်ရွယ်ထားသော ပါဝင် သည့် အကြောင်းအရာ ကန့်သတ်ထားသည့် ISP များသည် ၎င်းမှ မသင့်လျော်ပါဟု ယူဆသည့် အရာမှလွဲ၍ အားလုံးနီးပါးကို ဆက်သွယ်ခွင့်ကို ခွင့်ပြုသည်။ အီးမေးလ် အပေါ် ကန့်သတ် ချက်များ နှင့် စောင့်ကြည့်နေခြင်းများသည် အလွန်ရှားပါးခြင်း သို့မဟုတ် လုံးဝမတည်ရှိခြင်း တို့ဖြစ်သည်။ စစ်ထုတ်ထားသော/စစ်ထုတ်ခြင်းမရှိသော ဆက်သွယ်မှု နှစ်မျိုးစလုံးကိုပေး သော ISP များလည်းရှိသည်။ မိဘ၏ ထိန်းချုပ်မှုများနှင့် စကားဝှက်များကို ပေးသော ISP များရှိသောအခါ စစ်ထုတ်ထားသော ဆက်သွယ်မှုကို ရနိုင်သည်။ ဆာဗာ စစ်ထုတ်သော-ဘက်များ- ထိုဆာဗာများသည် တောင်းဆိုချက်ရှိပြီး အဖွဲ့အစည်း အပြင် အဆင်များတွင် အလွန်အသုံးဝင်သည်။ အပြင်အဆင် ဥပဒေအချို့တွင် ကျောင်းများ သို့မဟုတ် စာကြည့်တိုက် စနစ်များပါဝင်သည်။ အသုံးပြုသူ အားလုံးသည် အဖွဲ့အစည်းမှ သတ်မှတ်ထားသော ဆက်သွယ်ခြင်း မူဝါဒကို လိုက်နာရဖွယ်ရှိသည်။ စစ်ထုတ်ခြင်းသည် အဖွဲ့ အစည်း များ၏ ISP များမှ တိုက်ရိုက်လာခြင်း သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း ကိုယ်တိုင်မှ လာ ခြင်း ဖြစ်သည်။ စစ်ထုတ်ခြင်းကို အသုံးပြုသူ အဆင်ပြေစေရန် ပြုပြင်ဖန်တီးနိုင်သည်။ ကျောင်း ဒိစတြိတ် အထက်တန်းကျောင်း စာကြည့်တိုက်တွင် ဒိစတြိတ် အငယ်တန်း ကျောင်း စာကြည့် တိုက်ထက် ကွဲပြားခြားနားသော ပရိုဖိုင်း တစ်ခု ရှိနိုင်သည်။
ရှာဖွေခြင်း-အင်ဂျင် စစ်ထုတ်ခြင်းများ - ဂူးဂဲလ် နှင့် အယ်လ်တာ ဗစ်စ်တာ ကဲ့သို့သော ရှာဖွေခြင်း အင်ဂျင်များသည် အသုံးပြုသူများကို လုံခြုံစိတ်ချရသော စစ်ထုတ်ခြင်းတစ်ခု ဘက် သို့ လှည့်ရန် ရွေးချယ်စရာကို ပေးသည်။ လုံခြုံစိတ်ချရသော ထိုစစ်ထုတ်ခြင်းကို အသက်သွင်း ပြီး ပါက ၎င်း သည် ရှာဖွေထားသည့် ရလဒ်များအားလုံးမှ မသင့်လျော်သော ချိတ်ဆက်ခြင်း များ ကို စစ်ထုတ်သည်။ အကယ်၍ လိင်ကိစ္စများကို တစ်တစ်ခွခွ ဖော်ပြခြင်း သို့မဟုတ် ၁၈+ ပါဝင်သော အကြောင်းအရာများကို အသားပေးသော ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၏ URL ယူအာအယ် အစစ်အမှန် ကို တစ်ဦးမှသိရှိပါက၊ ၎င်းတို့တွင် ရှာဖွေခြင်း အင်ဂျင်ကို အသုံး ပြုခြင်း မရှိဘဲ ဆက်သွယ်နိုင်သည့် စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်။ Lycos လိုင်ကော့စ်)၊ Yahoo ရာဟူး နှင့် Bing ဘင် ကဲ့သို့သော အင်ဂျင်များသည် ကလေးများ နှင့် လိုက်ဖက်သော ဝက်ဘ်ဆိုဒ် များကိုသာ ထည့်သွင်းခွင့်ပြုသည့် ကလေး အလေးပေးသော ၎င်းတို့၏ မူကွဲ အင်ဂျင်များကို ပေးသည်။
4. အားသာချက် နှင့် အားနည်းချက်များ
ဤဆောင်းပါး၏ ဝေဖန်ချက် သို့မဟုတ် အငြင်းပွားဖွယ်ရာ အပိုင်းများသည် ထိုဆောင်းပါးသည် အကြောင်းအရာ၏ ဘက်မလိုက်သော အနေအထားမှ အမြင်ကို မတင်ပြကြောင်း အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်နိုင်သည်။ ထိုအပိုင်းများတွင် ပါဝင်သော အရာများကို စုစည်းပြီး ဆောင်းပါးတစ်ခု အဖြစ် ပြုလုပ်ခြင်းသည် ပို၍ ကောင်း နိုင်သည်။ မေလ ၂၀၁၀
6. လူ့ကျင့်ဝတ် နှင့် အမြင်
ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာကို စစ်ထုတ်ခြင်း ဆော့ဖ်ဝဲလ်သည် ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီများအား ၎င်းတို့ နှစ်သက်သလို ဆင်ဆာပြုလုပ်ရန် ခွင့်ပြုထားကြောင်း ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်သူများမှ စော ဒကတက်ကြသည်။ အောက်ဖော်ပြပါ #ဘာသာရေး သို့မဟုတ် နိုင်ငံရေး ဆင်ဆာပြုလုပ်ခြင်း ကို ကြည့်ပါ။ ပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာကို စစ်ထုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် တရားဥပဒေဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ အတွက် ပါဝင်သည့် အကြောင်း အရာကို အမည်တပ်သည့် ဆော့ဖ်ဝဲလ် သည် ဆင်ဆာပြုလုပ်ခြင်းနှင့်ထပ်တူ ညီမျှသည်ဟု အစိုးရ၏ အားပေးထောက်ခံမှု အပေါ် ၎င်းတို့သည် နောက်ထပ် အငြင်းပွားနေ ကြသည်။
7. ဥပဒေရေးရာ ဆောင်ရွက်မှုများ
၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် ဗာဂျီးနီးယားရှိ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဖယ်ဒရယ် ဒိစတြိတ် တရားရုံးမှ နေ၍ အများသုံးစာကြည့်တိုက်ရှိ ဥပဒေအရ မဖြစ်မနေလုပ်ရသော စစ်ထုတ်ခြင်းသည် အမေ ရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပထမပြင်ဆင်ချက်ကို ချိုးဖောက် ကြောင်း အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်။၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန် ကွန်ဂရက်စ်မှ အင်တာနက်တွင် မသင့်လျော်ခြင်းကို တားမြစ် သည့် ဆက်သွယ်ရေး သင့်လျော်ခြင်း အက်ဥပဒေ ကို အတည်ပြုခဲ့သည်။ အများပြည်သူ လွတ်မြောက်ရေး အုပ်စုများသည် ပထမ ပြင်ဆင်ချက် အောက်ရှိ ဥပဒေကို စောဒကတက် ခဲ့ ကြပြီး ၁၉၉၇ တွင် ဗဟိုတရားရုံးချုပ် မှ ၎င်းတို့ ကြိုက်နှစ်သက်သည်ကို ပြဋ္ဌာန်းပေးခဲ့သည်။အများပြည်သူ လွတ်မြောက်ရေး အငြင်းပွားမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် ၊ အထူး သဖြင့် အီလက်ထရွန်နစ် နယ်ပယ်သစ် ဖောင်ဒေးရှင်း ကဲ့သို့သော အုပ်စုများမှနေ၍၊ ဆိုဒ်များ ကို တားဆီး ပိတ်ဆို့လိုသော မိဘများသည် သူတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်သော ပါဝင်သည့် အကြောင်း အရာ ကို စစ်ထုတ်သည့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို သုံးခြင်းဖြင့် အစိုးရ၏ ပါဝင်ပတ်သက်မှုကို မလိုအပ်ကြောင်း ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
၁၉၉၀ နောက်ပိုင်းနှစ်များတွင် ဆင်ဆာထည် စီမံကိန်းကဲ့သို့သော အုပ်စုများသည် ပါဝင်သော အကြောင်းအရာကို ထိန်းချုပ်သည့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်အား ပြောင်းပြန်ပြုလုပ်သည့် အင်ဂျင်နီယာ နည်းကို စတင်ခဲ့ပြီး မည်သည့်ဆိုဒ်အမျိုးအစားကို ဆော့ဖ်ဝဲလ်မှ တားမြစ်ပိတ်ဆို့ခြင်းအား ဆုံးဖြတ်ရန် နာမည်ပျက် စာရင်းများကို မှတ်သားကြသည်။ ထိုအရာသည် လိုင်စင် သဘောတူ ညီချက် ဖြစ်သော "ဆိုက်ဘာ ကင်းလှည့်စောင့်ကြည့်ခြင်း" ကို ချိုးဖောက်သည်ဟု စွပ်စွဲသော ဥပဒေရေးရာ အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှုကို ဦးတည်စေခဲ့သည်။ထိုကဲ့သို့သော ကိရိယာ တန် ဆာပလာများသည် လက်မခံနိုင်သော ဆိုဒ်များကို လမ်းကြောင်းမှ ပိတ်ဆို့တားဆီးပြီး ရည်ရွယ် ထားသော ဦးတည်ရာများကို ပိတ်ဆို့တားဆီးရန် ပျက်ကွက်ကြောင်း ရှာဖွေတွေ့ ရှိခဲ့သည်။ အောက်ဖော်ပြပါ #အလွန်အကျွံ အားမာန်ကြီးသော စစ်ထုတ်ခြင်း ကို ကြည့်ပါ။
8. အလွန်အကျွံ အားမာန်ကြီးသော စစ်ထုတ်ခြင်း
Scunthorpe problem စကမ်သောပိ ပြဿနာ
ပါဝင်သော အကြောင်းအရာကို ထိန်းချုပ်သည့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်အား ပိတ်ဆို့တားမြစ်ထား သည့် ဆက်သွယ်မှုအဖြစ် Beaver ဘီအားဗာ ကောလိပ် ကို Arcadia University အာကာဒီယား တက္ကသိုလ် ဟူ၍ အမည်မပြောင်းလဲမီက ဖော်ပြခဲ့သည်။နောက်ထပ် ဥပဒေမှာ Horniman Museum ဟော်နီမန် ပြတိုက် ကို စစ်ထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
9. ဘာသာရေး သို့မဟုတ် နိုင်ငံရေး ဆင်ဆာပြုလုပ်ခြင်း
ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်များ၏ ဘာသာရေး နှင့် နိုင်ငံရေးပေါ်တွင် မှီခိုခြင်းကို အခြေခံ၍ ပါဝင်သော အ ကြောင်းအရာကို ထိန်းချုပ်သည့် ဆော့ဖ်ဝဲလ် အမျိုးအစားများစွာကို ဆိုဒ်များအား ပိတ်ဆို့ တားမြစ်ကြောင်းပြသခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဥပမာများတွင် ဘာသာရေး ဆိုင်ရာဆိုဒ် အချို့ ဗာတီကန် ဝက်ဘ်ဆိုဒ် အပါအဝင်)၊ နိုင်ငံရေးဆိုဒ်များ၊ မိန်းမလျာ/ လိင်တူဆက်ဆံသော မိန်းမ နှင့် ပတ်သက်သော ဆိုဒ်များ ကို ပိတ်ဆို့တားမြစ်ခြင်းများပါဝင်သည်။ X-Stop အိပ်စ် စတော့ပ်) သည် ကွေကာ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၊ လိင်မှုဆိုင်ရာ အသားပေးသော ဥပဒေ၏ အမျိုးသားရေးဂျာနယ်၊ အမွေအနှစ် ဖောင်ဒေးရှင်းနှင့် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ မြင်ကွင်း ၏ အစိတ် အပိုင်းများ ကဲ့သို့သော ဆိုဒ်များကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ဆိုက်ဘာ ထိန်း သူသည် အမျိုးသမီးများအတွက် နိုင်ငံတော် အဖွဲ့အစည်း ကဲ့သို့သော ဆိုဒ်များကို တားမြစ် ထားသည်။ပညာရေးဆိုင်ရာ သုတေသနပညာရှင်နှင့် ရှေ့နေဖြစ်သူ Nancy Willard နန်စီ ဝီလဒ် သည် ရှေးရိုးစွဲ ခရစ်ယာန် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံ အများပြည်သူဆိုင်ရာ ကျောင်းများနှင့် စာကြည့်တိုက်များကိုစစ်ထုတ်ခြင်းများပေးသည့် စစ်ထုတ်ခြင်းဆော့ဖ်ဝဲလ် ကုမ္ပဏီများ အကြားတွင် ရှိသော ရင်းနှီးသော ဆက်ဆံရေးများကို တင်ပြခဲ့သည်။
ပြည်သူအများ လက်ခံရရှိနိုင်သော စာရွက်စာတမ်းများတွင် ဖော်ပြထားသော သူမ၏ လေ့လာ ဆန်းစစ်ချက်မှနေ၍ သူမသည် ဘာသာရေး သို့မဟုတ် အခြား မသင့်လျော်သော ဘက်လိုက်မှု များကို အခြေခံထားသည့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များအား စစ်ထုတ်ခြင်း ဆော့ဖ်ဝဲလ် ကုမ္ပဏီ ခုနှစ် ခု မှ တားမြစ်ပိတ်ဆို့ထားကြောင်း ကောက်ချက်ချခဲ့သည်။ ကလေးမွေးဖွားမှုကို ထိန်းချုပ် ခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲခြင်း နှင့် သိကျွမ်းသူတစ်ဦးမှ မုဒိမ်းကျင့်ခြင်းကဲ့သို့ အရာများနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆိုဒ်များကို ထိုကုမ္ပဏီများမှ ပိတ်ဆို့ခြင်း ပြုနိုင်ပေသည်။
10. ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာကို အမည်တပ်ခြင်း
ပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာများကို အမည်တပ်ခြင်းအား ပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာကို ထိန်းချုပ်သည့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်၏ အခြားပုံစံတစ်ရပ်အနေဖြင့် စဉ်းစားနိုင်ပေသည်။ ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် အင်တာနက်တွင် ပါဝင်သော အကြောင်းအရာကို အဆင့်သတ်မှတ်သည့် အသင်း ICRA - ယခုအခါ မိသားစု အွန်လိုင်း လုံခြုံမှု အဖွဲ့အစည်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း - သည် အွန်လိုင်း ပါဝင်သော အကြောင်းအရာ ထောက်ပံ့ ပေးသူများ အတွက် ပါဝင်သော အကြောင်း အရာကို အဆင့်သတ်မှတ်သည့် စနစ်တစ်ခုကို စတင်ဖော်ဆောင်ခဲ့သည်။ အွန်လိုင်း မေးခွန်း လွှာ ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဝက်ဘ် မာစတာသည် သူ၏ ဝက်ဘ်တွင် ပါဝင်သော အကြောင်း အရာ ၏ သဘာဝကို ဖော်ပြသည်။ သိပ်သည်းပြီး ကွန်ပျူတာမှ ဖတ်ရှုနိုင် သော ထိုဖော်ပြချက် ပါဝင် သည့် ဖိုင်အငယ်တစ်ခုကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ၎င်းဖိုင်ကို ထိုဆိုဒ်အား တားမြစ် ပိတ်ဆို့ရန် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုရန် ပါဝင်သော အကြောင်းအရာ စစ်ထုတ်ခြင်း ဆော့ဖ်ဝဲလ်မှ နောင်တွင် အသုံး ပြုနိုင်သည်။
ICRA အမည်များသည် ပုံစံမျိုးစုံဖြင့် ဝင်ရောက်သည်။၎င်းတို့တွင် World Wide Web ကမ္ဘာအနှံ့ ဝက်ဘ်) သမဂ္ဂ ၏ အရင်းအမြစ် ဖော်ပြချက်ဘောင် RDF နှင့် အင်တာနက် ပါဝင်သော အကြောင်းအရာ ရွေးချယ်ခြင်းအတွက် မူဝါဒလမ်းစဉ် PICS အမည် များပါဝင်ပြီး ၎င်းတို့ကို မိုက်ခရိုဆော့ဖ် အင်တာနက် ရှာဖွေသူ ပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာ အကြံပေး သူမှ အသုံးပြုသည်။ ICRA အမည်များသည် ကိုယ်တိုင်အမည်ပေးခြင်း၏ ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အလားတူပင် ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ကလေးသူငယ် ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ထောက်ခံအားပေးသော ဆိုဒ်များ ASACP ၏ အသင်းမှ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများကို ကန့်သတ်ထားသော ကိုယ်တိုင် အမည် တပ်သော စတင်ခြင်းကို အစပြုခဲ့သည်။
ASACP အဖွဲ့ဝင်များသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၌ အဆိုတင်သွင်းခဲ့သော ဥပဒေရေးရာ ပုံစံမျိုးစုံတို့သည် အရွယ်ရောက်ပြီးသော ကုမ္ပဏီများ အား သူတို့၏ ပါဝင်သော အကြောင်းအရာကို အမည်တပ်ရန် အတင်းအကြပ်ပြုလုပ်သော သက်ရောက်မှုများ ရှိလာတော့မည်ကို စိုးရိမ်ခဲ့ကြသည်။ ICRAအမည်များနှင့် မတူဘဲ RTA အမည်သည် မေးခွန်းလွှာကို ဖြေဆိုရန် သို့မဟုတ် စာရင်းသွင်း အသုံးပြုရန်အတွက် ဝက်ဘ် မာစတာကို မလိုအပ်ပါ။ ICRA ကဲ့သို့ပင် RTA အမည်သည် အခမဲ့ဖြစ်သည်။ အမည်နှစ်မျိုး စလုံး သည် ပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာကို ထိန်းချုပ်သော ဆော့ဖ်ဝဲလ် ၏ ကျယ်ပြန့် သော အမျိုးအစား မှ အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရသည်။
ဆန္ဒအလျောက် ပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာကို အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း VCR စနစ်သည် သူတို့၏ ဆိုက်ဘာထိန်းသူ စစ်ထုတ်ခြင်း ဆော့ဖ်ဝဲလ် အတွက် ခိုင်မာသော ဝက်သစ်ချ ဆော့ဖ်ဝဲလ် မှ တည်ထွင်ထားသည်။ ၎င်းသည် PICS စနစ် အတွက် အခြားနည်းလမ်းတစ် ခုဖြစ်ပြီး ဝေဖန်သူအချို့မှ အလွန်ရှုပ်ထွေးသည်ဟု မြင်ကြသည်။ ၎င်းသည် စာရွက်စာတမ်း တွင်ပါဝင်သော အကြောင်းအရာ အမျိုးအစားကို သတ်မှတ်ရန် ဝက်ဘ်ပေ့ခ်ျ စာရွက်စာ တမ်းများတွင် မြှုပ်ထားသော HTML အိပ်ခ်ျတီအမ်အလ်) metadata မီတာဒေတာ အမည်များကို အသုံးပြုသည်။ ရင့်ကျက်သော နှင့် အရွယ် ရောက်ပြီးသော ဟူ၍ အဆင့် နှစ်ခုသာ သတ်မှတ်ပြီး၊ သတ်မှတ်ချက်ကို အလွန် ရိုးရှင်းစေရန် ပြုလုပ်သည်။
11. အများပြည်သူသုံး စာကြည့်တိုက်များတွင် အသုံးပြုခြင်း
အင်တာနက် စစ်ထုတ်ကိရိယာများ သို့မဟုတ် ပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာကို ထိန်းချုပ်သည့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်၏ အသုံးပြုခြင်းသည် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အများပြည်သူသုံး စာကြည့် တိုက်များတွင် ကျယ်ပြန့်စွာ ခြားနားသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အင်တာနက် အသုံးပြု သော မူဝါဒများသည် ဒေသတွင်း စာကြည့်တိုက် ဘုတ်အဖွဲ့မှ တည်ထောင်ခဲ့၍ဖြစ်သည်။ ကလေးသူငယ်များ၏ အင်တာနက် ကာကွယ်မှု အက်ဥပဒေ CIPA မှတဆင့် အင်တာနက် စစ်ထုတ်ကိရိယာများ အသုံးပြုခြင်းတွင် ကမ္ဘာ အနှံ့ ဝန်ဆောင်မှု ဈေးလျော့ပေးခြင်း လက်ခံ ရရှိကြောင်းကို ကွန်ဂရက်မှ အခြေအနေတင် ပြ ပြီး နောက်တွင် များ စွာသော စာကြည့်တိုက် များ သည် အင်တာနက် စစ်ထုတ်ကိရိယာများကို လက်ခံကျင့်သုံးခဲ့သည်။ အခြား စာကြည့် တိုက်များတွင် ပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာကို ထိန်းချုပ်သည့် ဆော့ဖ်ဝဲလ် ကို မတပ်ဆင် ပါ၊ လက်ခံနိုင်သော အသုံးပြုသည့် မူဝါဒများနှင့် ပညာရေးနှင့်ဆိုင်သော ဦးတည်ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ချက် များသည် အသက်အရွယ်အရ မသင့်လျော်သော ပါဝင်မှု အကြောင်းအရာ ဝင်ကြည့်နေသည့် ကလေးသူငယ်များ၏ ကိစ္စကို ရည်ညွှန်းသော်လည်း အရွယ်ရောက်သူ အသုံးပြုသူများ၏ လွတ်လပ်စွာ သတင်းအချက်အလက်ကို ဝင်ကြည့်ရန် အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက် ထားသည်။
များစွာသော ဥပဒေဆိုင်ရာ ပညာသင်ဆုရသူကျောင်းသားများသည် ဥပဒေဆိုင်ရာ အကြောင်း ကိစ္စများတွင်၊ အထူးသဖြင့် အသစ်ပြုပြင်သည့် အမေရိကန် အများ ပြည်သူ နှင့်ဆိုင်သော လွတ်လပ်မှု အသင်းအဖွဲ့ သည် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး စာကြည့်တိုက်များ တွင် ပါဝင်သည့် အကြောင်း အရာကို ထိန်းချုပ်သည့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်အသုံးချခြင်းကို စတင် ခဲ့ ခြင်းသည် ပထမ ပြင်ဆင် ဖြည့်စွက်ချက်ကို ချိုးဖောက်ခြင်း တစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည် သည်။ကလေးသူငယ်များ၏ အင်တာနက် ကာကွယ်မှု အက်ဥပဒေ နှင့် ဇွန်လ ၂၀၀၃ ခုနှစ် အမှုကိစ္စ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု စာကြည့်တိုက် အဖွဲ့အစည်း သည် CIPA မှာ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနှင့် အညီ ဖယ်ဒရယ် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု လက်ခံရရှိကြောင်း အခြေအနေ ပေါ် တွင် ရှိကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၎င်း၏ ပထမ ဖြည့်စွက်ပြင်ဆင်ချက် အလေးထားစရာ ကိစ္စ များသည် ဥပဒေ ၏ သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းဖြင့် ပပျောက်စေခဲ့ပြီး စစ်ထုတ်ခြင်းကိရိယာ သည် သူတို့၏ တောင်းဆိုခြင်းများအတွက် ဖြေရှင်းရန် အကြောင်းပြချက် မပါရှိဘဲ အရွယ် ရောက်ပြီး သူများ အသုံးပြုသည့် စာကြည့်တိုက် အသုံးပြုသူများ စစ်ထုတ်ခြင်း ဆော့ဖ်ဝဲလ် မလုပ် ဆောင်နိုင်ရန် ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ လူမျိုး တစ်ခုမက ပါဝင်သော ဆုံးဖြတ်ချက် သည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ နှင့်အညီ စိန်ခေါ်ခြင်း "အသုံးချ သကဲ့သို့" အနာဂတ်တစ်ခု ဖွင့်လှစ်ခြင်း အဖြစ် ထားခဲ့သည်။ နိုဝင်ဘာလ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်၊ ဝါရှင်တန်ပြည်နယ် မြောက် အလယ်ပိုင်း ဒေသ ဒိစတြိတ် စာကြည့်တိုက် NCRL ကို အရွယ်ရောက်ပြီး ကူညီထောက်ပံ့ အားပေးသူများ၏ တောင်းဆိုခြင်းများ အပေါ် ကန့်သတ် ချက်များ မလုပ်ဆောင်ရန် ငြင်းဆိုခြင်း အတွက် တရားမမှု တစ်ခု စွဲဆိုခဲ့သည်။ သို့သော် ၎င်း အမှုတွင် CIPA မှာ စိန်ခေါ် ခြင်း မခံခဲ့ရပါ။ မေလ ၂၀၁၀ တွင်၊ ဝါရှင်တန် အရှေ့ပိုင်း ဒိစတြိတ်အတွက် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ဒိစတြိတ် တရားရုံး မှ ရည်ညွှန်းပြောဆိုသည့် မေးခွန်းတစ်ခုကို မှန်ကန်ကြောင်း တရားဝင် ဖော်ပြရန် ဝါရှင်တန်ပြည်နယ် နိုင်ငံတော် တရားရုံးချုပ်ကို မေးခဲ့ သောအခါ ၎င်းသည် ထင်မြင် ယူဆချက်တစ်ခုကို ပေးခဲ့သည်-" ဝါရှင်တန် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ ပိုဒ်ခွဲ I ၊ § ၅ နှင့် အညီ၊ အများပြည်သူသုံး စာကြည့်တိုက် တစ်ခု ဖြစ်စေ၊ အရွယ်ရောက် ပြီးသော စာကြည့်တိုက် သို့ အမြဲလာနေသူ ၏ တောင်းဆိုချက် အပေါ်တွင် အခြေခံ ဥပဒေ အရ ကာကွယ်ထား သော စကား ပြောဆိုခြင်း ပါဝင်သည့် ဝက်ဘ် ဆိုဒ်များကို စတင်လုပ်ဆောင်ခြင်း မပါဘဲ စာကြည့်တိုက် သို့ အမြဲလာနေသူ အားလုံးအတွက် အင်တာနက် ဆက်သွယ်မှုကို စစ်ထုတ် နိုင်သည်။” NCRL အန်စီအာအယ် ၏ အင်တာနက် စစ်ထုတ်ခြင်း မူဝါဒသည် ဝါရှင်တန် ပြည်နယ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅ ၏ ပိုဒ်ခွဲ I ကို မချိုးဖောက်ခဲ့ ကြောင်းကို ဝါရှင်တန် ပြည်နယ် နိုင်ငံတော်တရားရုံးချုပ်သည် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ တရားရုံး မှ ပြောခဲ့သည်မှာ-" NCRL အန်စီအာအယ် စစ်ထုတ်ခြင်း မူဝါဒ သည် အကျိုးအကြောင်းဆီလျော်ပြီး ၎င်း ခံယူထားသည့် တာဝန်နှင့် ထိုမူဝါဒများနှင့် လိုက် လျောညီထွေရှိပြီး ဘက်မလိုက်သော ရှုထောင့် ဖြစ်သည်။
ဤကိစ္စတွင် ပိုဒ်ခွဲ I ၊ ပုဒ်မ ၅ ပါရှိသည့်အရာ အခြေ စိုက် ချိုးဖောက်မှု တည်ရှိကြောင်း မပါဟု ၎င်း သည် ဖော်ပြသည်။ NCRL အန်စီအာအယ် ၏ အခြေခံ ခံယူထားသည့် တာဝန်မှာ စာဖတ် ခြင်း နှင့် ရာသက်ပန် သင်ကြားခြင်းကို မြေတောင်မြောက်ပေးရန် ဖြစ်သည်။ NCRL အန်စီအာ အယ် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သကဲ့သို့၊ လေ့လာရန် နှင့် စဉ်းစားဆင်ခြင် တွေးခေါ်ရန် ဖြစ်စေ သော ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် အင်တာနက် ဆက်သွယ်မှု တွင် ကန့်သတ် ချက်များ သတ်မှတ်ရန်မှာ သဘာဝကျသည်။” ထိုအမှုသည် ယခု ဖယ်ဒရယ် တရာရုံးသို့ ပြန်ရောက်ရှိလာသည်။
ဩစတြေးလျအင်တာနက် လုံခြုံဘေးကင်းမှု အကြံပေးအဖွဲ့တွင် "အင်တာနက် လုံခြုံဘေး ကင်းမှု လက်တွေ့အသုံးကျသော အကြံဉာဏ်၊ မိဘ၏ ထိန်းချုပ်မှု နှင့် ကလေး သူငယ် များ၊ ကျောင်းသားများ နှင့် မိသားစုများ၏ အကာအကွယ်ပေးမှုအတွက် စစ်ထုတ် ကိရိယာများ" အကြောင်း သတင်းအချက်အလက်များရှိပြီး ထို့အပြင် အများပြည်သူ စာကြည့်တိုက်များလည်း ပါဝင်သည်။ဩစတြေးလျ အစိုးရမှ အဖိုးအခမဲ့ ရရှိရန် ပြုလုပ်ခဲ့သော ကွန်ရက် သတိပေးချက် ဆော့ဖ်ဝဲလ်သည် ၎င်းကို ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိခဲ့သည့် ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ပြီးနောက် တစ်ပတ် မကြာမီပင် ၁၆ နှစ် အရွယ်ကျောင်းသား Tom Wood တွမ် ဝုဒ် မှနေ၍ ချိုးဖျက်ခဲ့ကြောင်း စွပ်စွဲပြောဆိုသည်။ ထင်မြင်ယူဆရသည်မှာ အင်တာနက် ပါဝင်မှုအကြောင်းအရာ စစ်ထုတ် ခြင်းကို အစိုးရ၏ ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းနည်းပြဿနာများကို မီးမောင်းထိုးပြရန်အတွက် Wood ဝုဒ် သည် နာရီ ဝက် အတွင်းတွင် ဒေါ်လာ ၈၄ သန်း တန်ဖိုးရှိ စစ်ထုတ်ကိရိယာကို လမ်းလွှဲ ပြောင်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဩစတြေးလျ အစိုးရသည် ISP များအား ဩစတြေးလျတွင် အစီအစဉ်ပြုလုပ်သော သို့မဟုတ် ဩစတြေးလျ မှပေးသော တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုဖြစ်သည့် အသက် ကန့်သတ်ချက် ရှိသော ပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာ စီးပွားရေး MA၁၅+ ပါဝင်မှုအကြောင်းအရာ နှင့် R၁၈+ ပါဝင်မှုအကြောင်းအရာ သို့ ဆက်သွယ်ခွင့်ကို ကန့်သတ်ရန်" လိုအပ်သည့် ဥပဒေကို စတင် ခဲ့သည်။ ထိုအရာသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်မှ စတင်ရန် ဖြစ်ပြီး၊ သန့်ရှင်းစွာ ဖြည့်သွင်းခြင်းဟု သိထားသည်။
သန့်ရှင်းစွာ ဖြည့်သွင်းခြင်းသည် အဆိုပြုထားသော ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းချက်အရ မဖြစ်မနေ လုပ်ရ သော ISP အဆင့် ပါဝင်မှုအကြောင်းအရာ စစ်ထုတ်ခြင်း စနစ် တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Beazley ဘီဇယ်လီ ဦးဆောင်သော အတိုက်အခံ ဩစတြေးလျ အလုပ်သမား ပါတီ မှ ၂၀၀၆ သတင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် အဆိုတင်သွင်း ခဲ့ပြီး မိဘ၏ ကွန်ပျူတာ နားမလည်ခြင်း ကြောင့် ခုခံနိုင်စွမ်းမရှိသော ကလေးသူငယ်များကို ကာကွယ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် မူဝါဒ တစ်ခုကဲ့သို့ Rudd ရက်ဒ်) ALP အေအယ်ပီ အစိုးရမှ အကောင်အ ထည် ဖော်ရန် ၃၁ရက် ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ကြေငြာခဲ့ပြီး၊ Tasmania တက်စ်မေး နီယား) တွင် အစဦး စမ်းသပ်ခြင်းများ၌ ၂၀၀၈ အစီရင်ခံစာ တစ်ခု ထွက်ပေါ် ခဲ့သည်။ သန့်ရှင်း စွာ ဖြည့်သွင်း ခြင်းသည် ယခု အသုံးစရိတ်တွင် ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ISP များဖြင့် တိုက်ရိုက် စစ်ဆေးခြင်းများ အတွက် စိတ်ဝင်စားသော ဖော်ပြ ခြင်း ဆီသို့ ရွေ့လျား နေသည်။ အများပြည်သူ အတိုက်အခံပြုခြင်းနှင့် ဝေဖန်မှုသည် ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီး၊ EFA အီးအက်ဖ် အေ) မှ ဦးဆောင်မှုပြုပြီး ၎င်းတို့၏ ပြီးစီးပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း သည် ဩစတြေး လျနိုင်ငံသား အများစု၏ လူပြောသူပြောအရ "ခိုင်ခိုင်မာမာ ဆန့်ကျင်ခြင်း" ဖြင့် ပုံမှန်မဟုတ်သောနည်းလမ်း ဖြစ် သော ခေတ်ရေစီးကြောင်း မီဒီယာ၏ အထူးဂရုပြု ဆောင်ရွက်ခြင်း ရနေသည်။
ဝေဖန်မှု များတွင် ၎င်းတို့၏ ကုန်ကျစရိတ်၊ ချွတ်ယွင်းချက် ၎င်းသည် တရားမဝင်သော ဆိုဒ် များ ကို သာ ပိတ်ဆို့ထားခဲ့သည် ကို သေချာစေရန် မဖြစ်နိုင်ပါ ပါဝင်ပြီး အဖြစ်မှန် မှာ၎င်း သည် စည်းမျဉ်း အရ မလုပ်မနေလုပ်ရလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းကို လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့် အခွင့်အရေး များတွင် ကျူးကျော်ခြင်းတစ်ခုအဖြစ် မြင်နိုင် သည်။ အခြားအဓိကကျသော ဝေဖန်မှု အချက် မှာ စစ်ထုတ်ခြင်းသည် အချို့သော အရာများကို ရပ်ရန် အခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့သော် လည်း ထိုအရာများနှင့် ဆက်နွယ်နေသော မြေအောက်ကွင်းများကို အကျိုးသက်ရောက်လိမ့် မည် မဟုတ်ပါ။ စစ်ထုတ်ခြင်းသည် မိဘများ အတွက် မှားသော လုံခြုံရေး အသိဉာဏ်တစ်ခုကို ပေးကောင်းပေး နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး မိဘများ သည် ကလေးသူငယ်များ အင်တာနက်ကို အသုံးပြု နေစဉ် အနည်း ငယ်သာ ကြီးကြပ် ကောင်း ကြီးကြပ်နိုင်ပြီး တစ်ထပ်တည်းကျသော ဆန့်ကျင် ဘက် အကျိုး သက်ရောက်မှု ရလဒ်ကို ရရှိသည်။ သန့်ရှင်းစွာဖြည့်သွင်းခြင်းသည် Senator Conroys ဥပဒေပြု အထက် လွှတ်တော် အမတ် ကွန်ရွိုင်း ဌာန၏ တာဝန် ယူခြင်း တစ်ခု ဖြစ်သည်။
ဒိန်းမတ်တွင် ၎င်းကို မူဝါဒအဖြစ် ဖော်ပြပြီး ၎င်းသည် ဒိန်းမတ် တစ်လျှောက် ကလေးသူငယ် များ၏ စာကြည့်တိုက်များမှ မသင့်လျော်သော အင်တာနက် ဆိုဒ်များသို့ ဝင်ကြည့်ခဲ့ခြင်းကို တားမြစ်လိမ့်မည်။" နိုင်ငံအတွင်းရှိ စာကြည့်တိုက်တိုင်းသည် ကလေးများ စာကြည့်တိုက် ကွန်ပျူတာများကို အသုံးပြုနေသောအခါ ကာမရာဂစိတ် ဖြစ်ပေါ် စေရန် ရေးသားပြသမှု ပစ္စည်းများကို ဆန့်ကျင်လျက် ကလေးသူငယ်များကို ကာကွယ်ရန် အခွင့်အရေးမှာ အရေး ကြီးသည်။ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာန၏ သတင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီး Brian Mikkelsen ဘရိုင်ရန် မိုက်ကယ်ဆန် မှ ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးအနေဖြင့် ကျွန်ုပ် အတွက် မှာ ကလေးသူငယ်များသည် စာကြည့်တိုက်များ၌ အင်တာနက်ကို လုံခြုံစွာဖြင့် ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ရန်မှာ အဓိက ဦးစားပေး တစ်ရပ် ဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြသည်။"
14. လမ်းလွှဲပေးသည့် စစ်ထုတ်ကိရိယာများ
ယေဘုယျအားဖြင့် ပါဝင်သည့် စစ်ထုတ်ကိရိယာများသည် "သီးခြား နားလည်သည့် နည်း ပညာ ဖြင့် အပြည့်အဝ လမ်းလွှဲပေးခြင်း" ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ပိတ်ဆို့ခြင်း ပါဝင်မှုတွင် လွတ် အောင် နည်းလမ်းရှာ သည့် အကြောင်းကြားစာသည် အာမခံချက်. အသုံးပြု သူများသည် စစ်ထုတ်ကိရိယာ လမ်းကြောင်းပတ်ပတ်လည်ကို ရှာဖွေရန် နောက်ဆုံး တွင်မူ မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါ။"အချို့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်သည် FTP အက်ဖ်တီပီ) သို့မဟုတ် telnet တယ်နက် သို့မဟုတ် HTTPS အိပ်ခ်ျတီတီပီအက်စ်) ကဲ့သို့သော အခြား ရွေးချယ်စရာ ပရိုတိုကောများကို တစ်လှည့်စီ အသုံးပြုခြင်း၊ ကွဲပြားခြားနားသော ဘာသာစကားတွင် ဦးစီးဦးရွက်ပြုပြီး ရှာဖွေ ခြင်း၊ ပရောက်ဆီ ဆာဗာ သို့မဟုတ် Psiphon ဆစ်ဖွန် ကဲ့သို့ လွတ်အောင်လုပ်သူ ကို သုံးခြင်း ဖြင့် အောင်မြင်စွာ လမ်းလွှဲပြောင်းသည်။ ကက်ခ်ျ တွင်ထားသိုထားသည့် ဝက်ဘ် စာမျက်နှာများ သည် ဂူးဂဲလ်ဖြင့် ပြန်လာခြင်း သို့မဟုတ် အခြား ရှာဖွေခြင်းများသည် အချို့ ထိန်းချုပ်ညွှန်ကြားရာ ဌာနများသို့ လမ်းလွှဲ ပြောင်း နိုင်သည်။
ဝက်ဘ် လုပ်ငန်းစု ဝန်ဆောင်မှု များသည် ပါဝင်မှု အတွက် တလှည့်စီ လမ်းကြောင်းများကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ပို၍ အားရ လောက်အောင် မရှိသည့် ဒီဇိုင်း၏ အချို့ အစီအစဉ်များသည် သူတို့၏ လုပ်ငန်းစဉ်များ ပျက်ပြား စေခြင်းဖြင့် ပိတ်နိုင်သည်- ဥပမာ Microsoft Windows မိုက်ခရိုဆော့ဖ် ဝင်းဒိုးစ်) တွင် လုပ်ငန်းတာဝန် မန်နေဂျာ မှတဆင့် သို့မဟုတ် Mac OS X မက်စ် အိုအက်စ် အိဇ်) တွင် လှုပ်ရှားမှု မော်နီတာ ကို အသုံးပြုခြင်း။ လုပ်ငန်းနေရာအနှံ့ အတော်များများ နှင့် လုပ်ငန်း နေရာ အနှံ့သို့ ရေတွက်ပြသည့် ကိရိယာများမှ ပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာကို ထိန်းချုပ်သည့် ဆော့ဖ်ဝဲလ် ဖန်တီးရှင်များ တည်ရှိသည်။ ဂူးဂဲလ် ဝန်ဆောင်မှုများသည် စစ်ထုတ်ကိရိယာ များ ဖြင့် မကြာခဏ ပိတ်ဆို့ခံရသော်လည်း http:// အစား https:// ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် များသောအားဖြင့် ၎င်းတို့ကို လမ်းလွှဲခြင်း ပြုနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ပါဝင်မှု စစ်ထုတ်ခြင်း ဆော့ဖ်ဝဲလ်သည် လုံခြုံမှုရှိသော ဆက်သွယ်မှုများအတွင်း ပါဝင်သော အရာကို အဓိပ္ပာယ်မကောက်နိုင်၍ ဖြစ်သည် ဤ ကိစ္စတွင် SSL။
ပါဝင်မှု စစ်ထုတ်ခြင်းများ အများစုသည် လုပ်ပိုင် ခွင့် လွှဲအပ်ခံရသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များကို ပါဝင်သော စစ်ထုတ်ခြင်းကို လမ်းလွှဲရန် ခွင့်ပြုသည့် ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်တစ်ခုရှိသည်။ ဤအရာသည် ကွန် ပျူတာသည် ကြီးကြပ်ခံရပြီး ဝင်ရှာကြည့်ရန် လိုအပ်သည့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များသည် ပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာ စစ်ထုတ်ခြင်း ကိရိယာမှ ထက်သန်စွာဖြင့် ပိတ်ဆို့ခံထားရသော ပတ်ဝန်း ကျင်များတွင် အထူးသဖြင့် အသုံးတည့်သည်။အချို့ စစ်ထုတ်ကိရိယာများသည် လွယ်ကူစွာ လမ်းလွှဲပေးခြင်း ခံရနိုင်သည် ဆိုသော အချက် ကို တုံ့ပြန်ချက်အနေဖြင့် စစ်ထုတ်ကိရိယာတစ်ခုသည် မည်သည့်အရာကို ပိတ်ဆို့နိုင်သည်နှင့် မည်သည့်အရာကို မပိတ်ဆို့နိုင်သည့် အကြားရှိ ကွာဟချက်ကိုဖြည့်ရန် ကွန်ပျူတာ စစ်ဆေး သည့် ဆော့ဖ်ဝဲလ် အသစ် ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ SurfRecon ဆာဖ်ရီကွန်)သည် ကာမ ရာဂစိတ်ဖြစ်စေရန် ရေးသားပြသခြင်း စုံစမ်းမှုတွင် အာရုံ စိုက် စစ်ဆေးသည့် ဆော့ဖ်ဝဲလ် ပိုင်ဆိုင်သည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။လျှို့ဝှက်လုပ်သော VPN ဗီပီအန် ကို ပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာကို ထိန်းချုပ်သည့် ဆော့ဖ်ဝဲလ် လမ်းလွှဲပြောင်းပေးခြင်း ပုံစံကဲ့သို့ အသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ အထူးသဖြင့် အကယ်၍ ပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာကို ထိန်းချုပ်သည့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်သည် အင်တာနက် မုခ်ပေါက်လမ်း သို့မဟုတ် ဖိုင်းယားဝေါလ် တွင် တပ်ဆင်ထားလျှင်ဖြစ်သည်။
15. ထုတ်ကုန်များ နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ
အချို့ ISP များသည် မိဘ၏ ထိန်းချုပ်မှု ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်များကို ပေးသည်။ အချို့သည် မိဘ၏ ထိန်းချုပ်မှုများ ပါဝင်သော လုံခြုံရေး ဆော့ဖ်ဝဲလ် ပေးသည်။ Mac OS X v10.4 မက် အိုအက်စ် အိဇ် ဗီ ၁၀.၄) များစွာသော အသုံးချ ခြင်းများ စာ၊ ရှာဖွေသည့်အရာ ၊ အိုင် ချက်စကားပြော၊ ဆာဖာရီ နှင့် အဘိဓာန် အတွက် မိဘ၏ ထိန်းချုပ်မှုများ ပေးသည်။ မိုက်ခရိုဆော့ဖ် ၏ ဝင်းဒိုးစ် ဗစ်စတာ ကွန်ပျူတာ စက်လည်ပတ်ရေး စနစ် ပရိုဂရမ် တွင် လည်း ပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာကို ထိန်းချုပ်သည့် ဆော့ဖ်ဝဲလ် ပါဝင်သည်။ အချို့ ကုမ္ပဏီများသည် ကွန်ရက် မုခ်ပေါက်လမ်း လုံခြုံသော ကိရိယာတန်ဆာ ပလာများ သို့မဟုတ် ပရောက်ဆီ ဆာဗာများ ကို အသုံးပြုပြီး ပါဝင်သည့် အကြောင်း အရာကို ထိန်းချုပ်သည့် ဖြေရှင်းနည်းများကို ပြီးစီး အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်သည်။
ပါဝင်သည့် စစ်ထုတ်ခြင်း နည်းပညာသည် အဓိက ပုံစံ နှစ်မျိုးဖြင့် တည်ရှိသည်- ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုခြင်းမုခ်ပေါက်လမ်း သို့မဟုတ် အစုံလိုက် သုံး ပက်ကက် စစ်ဆေးခြင်း ။ HTTP ဝင်လမ်းအတွက် ကွန်ပျူတာ အသုံးပြု ခြင်း မုခ်ပေါက်လမ်း ကို ဝက်ဘ် ပရောက်ဆီ သို့မဟုတ် ပရောက်ဆီ တစ်ခုသာဟု ခေါ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော ဝက်ဘ် ပရောက်ဆီများ သည် ရှုပ်ထွေးသော စည်းမျဉ်းများကို ထင်မြင်သလို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အစဦး တောင်းဆိုချက် နှင့် ပြန်လည်ပေးပို့သည့် ဝက်ဘ် ပေ့ခ်ျ နှစ်မျိုး စလုံးကို စစ်ဆေးနိုင်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခု မချမှတ်ခင်အထိ တောင်းဆိုသူ ထံသို့ စာမျက်နှာ ၏ မည်သည့်အပိုင်းကိုမဆို ပြန်လည် ပေးပို့လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင် သူတို့သည် အားလုံး သို့မဟုတ် ပြန်လည်ပေးပို့သည့် ရလဒ်၏ အစိတ်အပိုင်း အနည်းငယ်အတွက် အစားထိုးခြင်း များ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အစုံလိုက် သုံး ပက်ကက် စစ်ဆေးခြင်း စစ်ထုတ် ကိရိယာ များသည် ဆာဗာ သို့ ဆက်သွယ်ခြင်းကို အစ၌ ဝင်ရောက် မနှောင့်ယှက်ပါ၊ သို့သော်လည်း ၎င်း ဖြတ်ကျော်သွား သည်နှင့် ဆက်သွယ် ခြင်း တွင် အချက်အလက်ကို စစ်ဆေး သည်။
အချို့သော အမှတ်များတွင် စစ်ထုတ်ခြင်း ခံရ မည်ဟု စစ်ထုတ် ကိရိယာမှ ဆုံးဖြတ်ကောင်းဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီး ၎င်းသည် ထို့နောက်တွင် TCP ပြန်ဆက်ခြင်း သို့မဟုတ် အလားတူ အစုံလိုက် သုံးပက်ကက် အတုကို ဖြည့်သွင်းခြင်းဖြင့် ဆက်သွယ်မှု ကို ဖြတ်တောက်လိမ့်မည်။ အစုံလိုက် သုံး ပက်ကက် စစ်ထုတ်ခြင်း သည် အဆက်အသွယ် လမ်းကြောင်း တစ်ခုကို စောင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့် နည်းပညာ နှစ်မျိုးကို အတူ တွဲပြီး အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းမှာ စစ်ထုတ်ခြင်း ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သော ပါဝင်သည့် အကြောင်း အရာ ရှိသည့် IP လိပ်စာတစ်ခုသို့ HTTP ဆက်သွယ်မှု စတင်နေခြင်းကို မြင်ရ သည် အထိ စောင့်ကြည့်ခြင်း ဖြစ် သည်။ အစုံလိုက် သုံး ပက်ကက် စစ်ထုတ် ကိရိယာများသည် ထို့နောက် တွင် ဆက်သွယ်မှုအား ဝက်ဘ်-ပရောက်ဆီသို့ ပြန်ညွှန်းပေးသည်။
ထို ဝက်ဘ် ပရောက် ဆီ သည် စစ်ထုတ်ခြင်းမရှိသော အဆက်အသွယ်များကို ဖြတ်သန်းသွားရန် မလိုဘဲ ဝက်ဘ် ဆိုဒ်ပေါ်တွင် အသေးစိတ် စစ်ထုတ်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ ထို ပေါင်းစပ်ခြင်း သည် အတော်အသင့် လူသိများသည် အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းမှာ စနစ်၏ ကုန်ကျစရိတ် ကို သိသာထင်ရှားစွာ လျော့ချနိုင်၍ဖြစ်သည်။မုခ်ပေါက်လမ်းကို အခြေပြုသော ပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာကို ထိန်းချုပ်သည့် ဆော့ဖ်ဝဲလ် သည် လမ်းလွှဲပြောင်းပေးရန် စားပွဲတင် ကွန်ပျူတာ ဆော့ဖ်ဝဲလ် ထက် ပို၍ ခက်ခဲ ကောင်း ခက်ခဲနိုင်သည် အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အသုံးပြုသူသည် စစ်ထုတ်ခြင်း ကိရိယာကို ကိုယ်ထိလက်ရောက် ဆက်သွယ်ရရှိခွင့် မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ လမ်းလွှဲ ပေးသည့် စစ်ထုတ်ကိရိယာများ အခန်းတွင်ရှိသော နည်းပညာများမှာ အလုပ် လုပ်နေဆဲ ဖြစ် သည်။
Wikipedia: အကြောင်းအရာ ထိန်းချုပ်ရေး ဆော့ဖ်ဝဲလ်